Maitiro Ekunyora (Uye Kupa) Anofuridzira Uye Anokurudzira Kutaura - Blog
Maitiro Ekunyora (Uye Kupa) Anofuridzira Uye Anokurudzira Kutaura
Wekupedzisira, mukuru anokurudzira munyori uye mutauri, Dale Carnegie, akati panogara paine hurukuro nhatu pane yega yaunopa.
Iyo yaunoda iwe wakapa
Chinangwa chedu chinofanirwa kunge chiri chekuita kuti idzi nhaurwa nhatu dziwirirane zvakanyanya sezvinobvira nemumwe. Isu tinogona kusambozviita zvakakwana, asi isu tinogona kusvika padhuze sezvinobvira.
Izvi hazviitike netsaona kana netsaona. Izvo zvinongoitika chete nekutevera yakavimbika seti yemirau.
Kana isu tikateedzera iwo maratidziro, mhedzisiro yacho inofanirwa kuve hurukuro yakanaka kwazvo inozadzisa chinangwa chayo.
Iko hakuna Chinotsiva Kugadzirira
Iko hakuna chete chinotsiva gadziriro. Kunyangwe vakurukuri vakanaka vanofanirwa kugadzirira.
mienzaniso yekutarisa kutsvaga hunhu muvakuru
Muchokwadi, kugadzirira ndicho chikonzero chekutanga ivo vari vatauri vakanaka. Izvo hazviite chete - kunyangwe iwe paunenge uine tarenda zvakanyanya kana chipo.
Usambofa wakabiridzira pane kugadzirira. Uchazozvidemba chete gare gare.
Kugadzirira kunotanga kare zuva rekutaura risati rasvika. Tinogona kupatsanura nzira yekugadzirira muzvikamu zvitanhatu.
Kunyangwe iyo Yekuongorora chikamu chimiro chekugadzirira, sezvo ichikugadzirira iwe yako kutaura kunotevera.
Iwe unofanirwa kutanga nekufunga kuti sei wakasarudzwa kuti uite iyi yakanyanya kutaura.
Ndeapi zivo iwe yaunayo iyo vamwe vasina? Ndeapi hunyanzvi hunoda kugovaniswa? Ndezvipi zviitiko zvingabatsirwa nevamwe nekuziva? Ndeapi hunyanzvi hunoda kupa vateereri vako?
Kubvunza iyi mhando yemibvunzo kunobatsira iwe kufunga pamusoro pezvauri kuda kutaura uye nemaitiro aunoda kuzvitaura.
Kutaura kunozoitwa kupi? Kuchave nenzvimbo yenhandare? Matafura ane sirin'i inopenga? Imba yacho ichave neruzha rwakakomberedza here? Uchakwanisa kufamba famba here kana kuti iwe unofanirwa kuramba uri panzvimbo imwechete?
Vateereri vako vangave neruzivo rwakazara nezve chidzidzo chako here, kana ichi chichava chinyorwa chitsva chavo? Vateereri vangave vakuru kana vadiki? Varume kana vakadzi? Basa rimwe chete kana musanganiswa? Izvi zvine basa here?
Zvemukati ndizvo zvakakosha. Hapana munhu anokanganiswa kana kufambiswa ne kutaura kwakanaka kwekutaura kwakaipa.
Kutaura kwakanaka hakuendwe chete zvakanaka - kune zvinhu uye zvirimo zvirimo. Hurukuro nezvisina kusimba zvemukati hazvibatsiri chinhu kunze kwekushatirisa vateereri.
Iwe uchazoda kupa yakawanda nguva kune izvo zvaunofunga kutaura uye nemabatiro aunofunga kuzviita. Hezvino zvimwe zvinhu zvekuchengetedza mupfungwa paunenge uchishandira pane zvirimo zvekutaura kwako.
Sarudza chinangwa kana chinangwa chehurukuro yako.
Chii chaunoda kuzadzikisa nekutaura kwako? Zvinenge zvese kutaura kunowira mune chimwe chezvikamu zviviri. Kutaura kunoitirwa kana:
Ndokunge, kutaura kunoitirwa kunyengetedza vateereri kuti vaite chimwe chinhu. Kuita chiito cherumwe rudzi. Kana kuti zvirinani kufunga nezve kutora matanho.
Kana kutaura kwacho kwakagadzirirwa gonesa kana kushongedza vateereri. Kugadzirira vateereri kune rimwe basa, basa, kana chirongwa.
Kubatsira kutarisisa kutaura uye kujekesa chinangwa chayo, ipfungwa yakanaka taura chinangwa yekutaura mune chirevo chakareruka. Kutaura kwekunyengetedza kune chirevo chakadai.
- Mugari wese anofanirwa kuvhota musarudzo nekuda kwezvikonzero zvishanu zvinotevera.
- Munhu wese anofanirwa kurovedza zuva nezuva nekuda kweizvi gumi zvehutano.
Iko kutaura kwekushongedza kwakasiyana. Chinangwa chayo hachisi chekukurudzira vateereri kuti vatore danho ravangangodaro vasina kufunga nezvaro - nderekugonesa vateereri kutora danho ravakatogoneswa kutora.
Iyi ndiyo mienzaniso miviri yerudzi rwekugadzirira chinhu chekutsvaga.
- Unogona kusununguka mune zvemari kuburikidza nematanho matanhatu anotevera.
- Chero ani zvake anogona kubheka pie yakanaka yeapuro nekutevera matanho aya masere.
Kunze kwekunge iwe uchiziva zvaunoda kuzadzikisa nekutaura kwako, hazvigoneke kuti iwe uchazviita. Sezvo quip inoenda: 'Kana iwe usine chinangwa nechinhu, une chokwadi chekurova.' Saka tarisa pane chimwe chinhu. Usavavarira chinhu.
Iwe uchazoziva tarisiro yako nekuratidza chinangwa chekutaura kwako mune yakapusa uye yakajeka chirevo chekutaura. Iwe unoda here kuti kutaura kwako kunyengetedze? Iwe unoda here kuti hurukuro yako igadzirire? Ndipo paunoda kutanga.
Ita kuti nyaya yacho inetseke.
Iwe uchazoda kugadzira chinodiwa icho chinotaura chinotaura. Zvimwe zvinodiwa zviri pachena. Zvimwe zvinodiwa iwe zvaunoda kuti uburitse kuti vateereri vako vazive kuti vanazvo.
Iwe unoda kuti vanzwe ivo haikwanise kukwanisa kusateerera kune izvo zvauri kuda kugovana. Unogona kuisa mubvunzo se:
- Unoita sei kuti urambe uine hutano hwakanaka iwe uchinge uine nguva shoma yekuzvishandisa?
- Unogona sei kuenda kumberi mune zvemari kana inflation ichidya mari yako shoma?
- Sei uchifanira kupa nguva yekuverenga iwe uchinge uchinge uchinge uine nguva yekudya uye yekurara?
maratidziro aungaita musikana wako
Ita tsvagiridzo yako.
Kunyangwe iwe uchiziva musoro wako chaizvo, iwe uchafanirwa kutsvagurudza. Ita shuwa kuti izvo zvauno 'ziva' ndizvo chaizvo zviri. Iva nechokwadi chekuti iwe uripo. Hapana chinogadzira kushomeka kwekuvimbika senge yechinyakare ruzivo.
Kunyangwe iwe uri nyanzvi pachidzidzo chako, iwe uchafanirwa kufunga kuti ungaita sei chipo zvaunoziva. Usambofa wakavhiringidza 'kuziva sei' ne 'kuratidza sei.'
Shandisa zvakanaka rutsigiro zvinhu.
Shandisa mienzaniso yakanaka kujekesa uye kujekesa pfungwa dzako. Sanganisa nyaya dzinopa hupenyu kumifungo yaunounza. Goverana zviitiko zvako pachako zvinosimbisa chokwadi chauri kuyedza kuratidza.
Tsvaga makotesheni makuru anosimbisa chokwadi chezvauri kutora. Shandisa zvakafanana izvo zvinodzidzisa zvisingazivikanwe nenzira yeanozivikanwa.
Nyora kutaura kwako izwi neshoko.
Kana uchinge wadzikisira musoro wenyaya, nyora chirevo chako chekujekesa chinojekesa chinangwa chekutaura kwako, uye nekufunga pane zvauri kuda kutaura uye nemabatirwo aunoda kuzvitaura - unenge wakagadzirira isa kutaura kwako pabepa.
Kana, zvingangoita, pakombuta yako.
Nyora pasi mazwi ese aunoda kutaura.
Sezvo mutemo, zviri nani kutanga nehurukuro. Nyora pfungwa dzako huru, uye wozadza iwo ma-sub-points zvinoenderana. Izvi zvinobatsira kuona kuti iwe unogara pane meseji. Izvo zvakare zvinobatsira kuverengera zvine mutsindo kuyerera kune ako pfungwa uye mapoinzi.
Wongorora hurukuro yako yakanyorwa.
Paunopedza kunyora kutaura kwako, dzokera pamusoro pazvo nokungwarira. Tsvaga nzira dzekutaura zvirinani zvawataura. Pane izwi riri nani here? Pane imwe nzira here yaunogona kuzvitaura zvakajeka? Nechimwe chibhakera?
Ramba uchifunga kuti kutaura kwakafanana nekutaurirana kwakanyorwa, asi hazvina kufanana. Pane zvinhu zvinoshanda zvakanaka pabepa izvo zvisingashande zvachose kana zvataurwa. Zvakasarudzika ndezvechokwadiwo.
Chengeta zviri nyore. Vateereri vanozokoshesa zvakapusa. Sekutaura kwakaita Albert Einstein, zvinofanirwa kunge zviri nyore sezvinobvira - asi kwete nyore.
Paunenge wagutsikana kuti kutaura kwako hakugone kuvandudzwa panguva yaunenge uchinge wasara yekugadzirira, mhanyisa nayo nekuiverenga zvinonzwika.
Edza kurirava nenzira imwe cheteyo yauchataura nayo. Izvi zvinobatsira kugadzirisa mupfungwa dzako nzira yakanyanya kunaka yekuzvitaura.
Iwe haufanire kuvavarira kukwana. Kukwana hakuna kunyanya kuomarara kuwana, hazvina basa. Kutaura kwako kunogona kukura pasina kukwana.
Iwe zvakare unozofanirwa kubvumidza nguva yekupolishira hurukuro yako - saka usashandise nguva yese yaunenge uchingonyora kutaura. Icho chikamu chakakosha, asi chinongova chikamu chimwe chete.
Pane imwe nguva iwe uchafanirwa kumira kushanda pane zvirimo zvekutaura kwako, uye enda kuchikamu cheDelivery. Hauna nokusingaperi kugadzirira.
Hazvina basa kuti kutaura kwako kwakanaka sei pabepa - chakakosha ndechekuti zvinosvika sei pakataurwa. Kutaura kunosimuka kana kudonha pane iko kuendeswa. Zvimwe zvinhu zvakakosha zvekuchengetedza mundangariro:
Tanga nesumo yakanaka inobatana nevateereri uye inovakoka kuti vateerere mberi. Unogona kuhwina kana kurasikirwa nevateereri mumasekondi makumi matanhatu ekutanga - saka ita kuti chako chekutanga chive chakanaka. Iva munhu anoonekera kuitira kuti vagokufarira, izvo zvichavaita kuti vawedzere kuteerera.
Pane nzira dzinoverengeka dzaunogona kutanga. Asi ndokumbirawo usatange nerondedzero inonetsa yekutapurirana kwemotokari yawakasangana nayo uchienda kunzvimbo yacho. Kana kuti uri kurwisa sei dzihwa. Kana kuti hauna kurara zvakanyanya sei husiku hwapfuura. Blah, blah, blah. Iwe unozoita kuti vateereri vako vade kumborara kana kutungamira kune vanobuda. Usazviita. Tanga mukati chaimo.
Ungangoda kutanga ne chimwe chinhu chinosetsa . Pamwe hausi kuseka, kunze kwekunge uri hunyanzvi mutauri. Ingoenda nechinhu chinosekesa - zviri nyore uye kazhinji zvinoshanda.
Chinangwa chako apa ndechekupa vateereri vako chikonzero chekuteerera kune izvo zvauri kuda kugovana. Simbisa kutendeseka kwako pachine nguva kuti vazive kuti unogona kuvimbwa. Kunyemwerera. Shandisa izwi risiri remitambo. Iyi haisi yemitambo - kutaura.
Gadzirira vateereri vako izvo zviri kuuya pasina kuba kutinhira kwako pachako. Vapei zvakaringana kuitira kuti vade kunzwa zvakawanda. Kwete zvakanyanya. Kwete zvakanyanya.
Dzimwe nzira dzekutanga nadzo dzinosanganisira:
Nyaya inosetsa kana chiitiko
Kuwanikwa kutsva kubva pakutsvagisa-kumucheto kutsvagisa
Dambudziko rinozivikanwa rinoda kugadziriswa
TO mubvunzo unogombedzera izvo zvinofanirwa kupindurwa
Chido chakajairika icho munhu wese anacho
Gangaidzo rerumwe rudzi
Vasiye vachishuva, kwete kuvenga. Iti zvakakwana, asi kwete zvakanyanya. Siya vateereri vachishuvira kuti dai wataura zvimwe. Usavasiye vachishuvira kuti dai wakamira maminetsi gumi zvisati zvaitika. Vasiye vachida kudarika zvaunogona kuvapa, asi vape zvakakwana kuti vasangane nechinangwa chekutaura kwako.
Dzidzira zvauchazoparidza. Dzidzira kutaura kwako kusvikira wawana zvakanaka. Taura zvinonzwika. Usango verenga kutaura kwako wakanyarara. Rangarira, kutaura kwako kunenge kuri inzwa - kwete kuverenga. Unoda kuziva kuti sei kurira - kwete maverengero ainoita.
Shandisa zvinyorwa. Gadzirira zvinyorwa zvakapusa, zvakajeka, uye zvipfupi kubva pane yako chinyorwa. Usaedze kubata nemusoro kutaura kwako. Zvinongonzwika chete kubata nemusoro. Uye zvichave zvakanyanya kunetsa kuendesa.
Usaverenge chinyorwa chako futi. Panzvimbo pezvo, shandisa zvinyorwa zvakagadzirirwa zvakanaka zvinongofukidza pfungwa dzako huru. Iwe unotoziva zvaunoda kutaura nekuti iwe wakazvinyora pasi izwi neshoko. Iwo manotsi ndeekungozorodza mupfungwa dzako izvo zvawakatofunga yaive nzira yakanakisa yekuzvitaura.
Zvinyorwa zvinokusunungura iwe kubva kuhudzvanyiriri hwekuisa mumusoro kutaura kwako kana kuverenga kutaura kwako. Manotsi achakubatsira iwe uve wakasununguka , kusanyanya kunetseka, uye zvakasikwa zvakanyanya. Dzidzira kutaura kwako nezvinyorwa zvako chete.
Shandisa zvakasikwa, zvisina kumanikidzwa kuita zvinotaurirana pane kutsausa.
Tarisa vanogadzira hurukuro painternet uye dzidza kubva kwavari. Usaedze kuteedzera chaizvo, asi dzidza zvimiro nekuzvitarisa uye nekuzvidzidza. Dzidza kubva kune masters. Tarisa dzimwe Ted Talks . Mazhinji acho akanaka. Iwe unozodzidza nekudzidza zvinobudirira hurukuro.
Dzidzira kutaura kwako pamberi pegirazi. Shandisa dhairekodhi kurekodha kutaura kwako. Iwe unogona kudzidza zvakawanda nekuterera kune yako wega hurukuro. Unogona kuona maitiro aunoda kubvisa. Dzidzira kutaura kwako pamberi peshamwari uye koka mhinduro yavo. Chishandiso chakanakisa vhidhiyo. Vhidhiyo iwe pachako uchidzidzira kutaura kwako. Ihwo hupfumi hwemashoko aunogona kushandisa.
Kudzidzira hakuiti kukwana. Asi kuita kunozokuswededza padyo nekukwana. Kutaura kushoma kwazvo kwakakwana. Nhau dzakanaka ndedzekuti hurukuro zhinji dzakanaka. Kunaka ndicho chinangwa chako, kwete kukwana.
Nguva yekutaura kwako kuti uve nechokwadi chekuti usapfuure iyo nguva yawakapihwa. Wese munhu anozotenda.
Kutaura kwako kunofanirwa kuve nemhedziso. Haufanire kuti, 'Mukupedzisa.' Kunyangwe vateereri vanononoka vanozozviona. Ipa pfupiso yakajeka yezvawakagovana. Pfupiso inofanirwa kujekesa nekudzokorora mapoinzi akakosha.
Yeuchidza vateereri vako nezve izvo zvavanofanirwa kutenda iko zvino, kana izvo zvavanofanirwa kuziva manje maitiro ekuita - nekuti ivo vakabatana nekutaura kwako. Vanogona kusaita izvo zvawakakurudzira kuti vaite, asi ivo vanofanirwa kuzvifunga kana kutaura kwako kuchirova. Kana ivo vanofanirwa kuve nechivimbo chekuti vakave vakagadzirirwa kugadzirisa rimwe dambudziko nyowani.
Ita shuwa iwe unopa vateereri vako mamwe anoshanda ekutora. Dambudziko rakakodzera rinowanzo fanirwa. Usavatuka. Ingovakoka nechivimbo. Kukwidza kwekupedzisira kunowanzo kubatsira uye kukosheswa.
Hazvigone kuti iwe ugoendesa hurukuro yakakwana - saka usatarisira kudaro. Iwe uchada kuendesa yakanakisa kutaura - saka ronga ku. Kana kutaura kwako kwapera, ita chokwadi chekutora nguva yekuzviongorora. Izvo zvinokubatsira iwe kuvandudza, uye ako epamberi ekutaura anofanira kuve ari nani uye nani.
Tarisa vhidhiyo kana teerera kurekodhwa kwekutaura kwako uye nyora zvinhu zvaungadai wakaita zvirinani wozviita zvirinani nguva inotevera. Tarisa maitiro ekutaura anovhiringidza, kutsamwisa, kana kutsausa. Bvisa ivo nguva inotevera.
Tarisa nzvimbo dzausina kujeka uye dzidza matauriro nekuwedzera kujekesa nguva inotevera. Ipa kopi yekutaura kwako kune mumwe munhu anogona kukupa yakakosha mhinduro.
Kana iwe uchida kuti kutaura kwako kunyengetedze, kushongedzera, kukanganisa, kukurudzira ... kunyangwe kukurudzira - tevera aya marongero.
Zvino, enda unogogodza kunze kwepaki! Rombo rakanaka.
8 Akajairwa Mifananidzo ya Becky Lynch iwe pamwe hauna kunge waona
5 Zvikonzero nei Dolph Ziggler angasiya WWE zvakanaka
Wepamusoro 5 WWE Royal Rumble PPVs enguva dzese
WWE WrestleMania Kubvumbi 2nd 2017, Yakazara Ratidza Match Mhinduro uye Vhidhiyo Zvakakosha
Unofanira Kakawanda Sei Kuona Wako Mukomana / Musikana?
11 Zviratidzo Iwe Une Hukama Kushushikana + 5 Nzira dzeKukunda Izvo
Rapper paWWE 2K16 tsvuku kapeti, Ryback uye PTP kudonha mavhidhiyo
11 kufa kunotyisa kweWWE superstars
WWE inogadzira hilarious botch neiyo Undertaker's T-shati nyowani
Yese HWE Hell mune Cell Cell PPVs yakatarwa kubva pakaipisisa kusvika pakanakisa
5 WWE Superstars vanotsigira zvakanyanya Donald Trump
10 WWE Arm Kurwa mitambo: Ndiani akakunda uye ndiani akarasikirwa?
unoda zvakanyanya iwe unoda apo rudo runorwadza
chii chinonzi madonna mambure
40 uye kufinhwa nehupenyu hwangu
zvinhu zvekuita pamba kana wako wakasuruvara
iyo narcissist mask inobuda riini